भ्रष्टचारी र प्रेम देखाएर फिल्म चल्छ त ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsभ्रष्टचारी र प्रेम देखाएर फिल्म चल्छ त ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- फिल्मको कथावस्तुमा नयाँपन खोज्न आवश्यक छ । कथावस्तुमा दर्शकलाई तान्न पनि आवश्यक छ । तर, फिल्मको कथावस्तुमा फरक हुने वित्तिकै चलिहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन । फरक फिल्म बनाउनका लागि रामशरण पाठक चिनिएका छन् । तर, उनको फरक फिल्मले काम गरेको छैन । सबै फिल्म असफल छन् ।
ठेगाना, वल्र्ड कप इन नेपाल जस्तो फिल्म बनाएपनि उनी असफल भए । प्रेमगीत २ उनकै कारणले चलेको भने होइन । उनै, पाठकले बनाएको सय कडा १० फिल्म माघको १८ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । फिल्मले देशमा हुने गरेको भ्रष्टचारको कथालाई देखाएको छ भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको फिल्म भन्दै प्रचार गरिएको छ ।
तर, फिल्मको प्रचार जसरी गरेपनि अहिलेसम्म दर्शक यो फिल्मलाई लिएर खासै रुचिकर भएको देखिदैन । फिल्ममा मनोज गजुरेललाई हाइलाइट गरिएको छ । अरु, कलाकारलाई दर्शकले चिन्दैनन् । करुणा श्रेष्ठ, अमृत ढुंगाना जस्ता कलाकारमा यसका निर्माताले ठूलो आशा राख्नु आवश्यक छैन ।
स्टेज कार्यक्रममा दर्शकले मनोज गजुरेललाई मन पराएका छन् । उनलाई फिल्ममा मन पराउँछन् भन्ने पक्का पनि छैन । नेपालमा कमेडी फिल्मले जरा गाडेको छ । देशमा भ्रष्टचार देखेर यूवापुस्ता वाक्क त छ । तर, नेपाली दर्शकले सय कडा १० को भ्रष्टचारको कथालाई साथ देलान् त ? यसै भन्न सकिदैन ।
सिनेमाको ट्रेलर र गीतले खासै प्रभाव नपारेको अवस्थामा सिनेमाको व्यापारलाई लिएर यसको निर्माता पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
saya kada dash
यस्तो बन्यो बुलबुलको ट्रेलर
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – रिल लाइफमा सफल जोडी भन्ने वित्तिकै, ह्यान्डसम हिरो, ब्यूटिफल हिरोइन र उनीहरुलाई मन पराउने दर्शकको संख्यालाई हेरिन्छ । यही आधारमा नेपाली फिल्मको सफल जोडीको मापन गरिएको पनि छ । राजेश हमाल र करिश्मा […]
आफूले बनाउँदा जोखिम नमोल्ने कलाकार अरुको लगानीमा किन फरक कथा खोज्छन् ?
February 22, 2019 Tulasa Karki Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- अभिनेत्री केकी अधिकारीले बुलबुल सिनेमा हेरेपछि यसको प्रशंसा गरिन् । प्रशंसा गर्दै उनले यस्तो सिनेमा आफूले गर्न पाएको खण्डमा हुन्थ्यो भन्ने लागेको पनि सुनाइन् । केकीले फिल्मको प्रशंसा गर्दै गर्दा स्वस्तिमाको कामले छक्क […]